Yuni. Haramaayaa fi Madda Walaabuutti 5 ajjeefaman; Jimmatti boombii brt. Oromoo irratti darbatameen 7 madaayan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Yuni. Haramaayaa fi Madda Walaabuutti 5 ajjeefaman; Jimmatti boombii brt. Oromoo irratti...
Yuni. Haramaayaa fi Madda Walaabuutti 5 ajjeefaman; Jimmatti boombii brt. Oromoo irratti darbatameen 7 madaayan
Ajjeechaan, hidhaa fi doorsisaan Oromoo irra gayaa jiru xiyyeeffannaa hawaasa addunyaa argataa jira
Bubbeen shororkaa mootummaan Oromiyaa keessa gadi lakkisu lubbuu Oromoo qulqulluu baasuu, qaama lammii hir’isuu fi mana hidhaatti kuffisuu bal’inaan itti fufee jira. Gocha gara jabeenyaa eda Yunivarsiitii Haramaayaa keessatti geggeefameen lubbuun barattoota sadi akka tasaati darbuun bal’inaan gabaafameera. Ammatti barattoota woreegaman keessaa maqaan isaa kan beekame barataa Fahmii Abdulaziiz qofa dha. Barataan kuni dhalataa magaalaa Ciroo ta’uun isaas hubatameera.
Shororkaan woraanaa Yinvarsiitii Haramaayaa liqimse
Dukkanni shororkaa Haramayaa liqimse ammatti kan galaafate lubbuu barattootaa qofa ta’us; barsiistonnii fi hojjattoonni yunivarsiitichaas doorsisamuu, rukutamuu fi hidhamuu jalaa hin bane. Humni Agaazii waajjirootaa fi mana jireenyaa barsiistotaa seenuudhaan kompiitaraa fi bilbila isaanii caccabsa, jireenya isaanitti hadheessa. Kuni hundi osoo ta’uudha, barattoonni mana barnoota Haramaayaa obboleewwan isaanii ajjeefamaa, halkan guutuu rukutamaa fi hidhatti guuramaa bulaniif birmachuuf, kan gootummaa addaatiin daanditti bayan.
Yinvarsiitii Jimmaatti barattoota Oromoo irratti boombiin darbatame
Ukkaamsuu fi shororkeessuun waan bakka tokkotti daangeffamee miti. Edas, woraanni mootummaan ummatatti bobbaase, Yunivarsiitti Jimmaa keessatti barattoota ukkaamsuu fi mana irratti caccabsuu bal’inaan geggeessaa bule. Achuma Yunivarsiitii Jimmaatti, boombii barattoota Oromoo irratti darbatame jedhameen barattoonni torba madaayuun himameera. Sadarkaan madaa barattoota irra gayee fi maqaan isaanii ammatti hin beekamne.
Yunivarsiitiin Madda Walaabuus tasgabbiin wolitti deebi’uu hin dandeenye. Humnoonni mootummaa, gocha garajebeenyaan beekaman, ukkaamsuu fi hidhuu bira ce’anii lubbuu nama lamaa galaafatuun isaanii gabaafameera.
Hiriirri mormii godinoota Harargee woliin gayaa jira
Gochi sukkanneessaan iddoo hundatti lammii isaa irratti raawwatamaa jiru kan isa kakaase ummanni Harargee magaalota Baddeessaa, Mi’eessoo, Haramaayaa, Qobboo, Waaccuu fi Gille guyyaa har’aa hiriiruudhaan sagalee deeggarsa obboleewwan gidiramaa jiraniif dhaggeessisa; akkasumas aarii mootummaa irraa qabu ifatti argisiisaa jiraachuun beekameera.
Hallayaa gabrummaa fi hiyyummaa keessaa kan bayamu sodaan maletti wolqabatanii funduratti tankaarfachuu qofaan
Yeroo duumessi shororkaa fi du’aa guutuu samii Oromiyaa haguuge kanatti, kan hunda caalatti nama raajuu fi boonsu, gootummaa barattoonnii fi ummanni Oromoo argisiisaa jiruudha. Ummanni mirgaa fi haqa isa dheebote; jireenya gadadoo fi gad-aantummaa hifate sodaa waan jedhamu guutummatti onnee isaa keessaa haqate.
Gama biraatiin, sochii bal’aa Oromoon hanga ammaatti geggeesse irraa kan ifatti argine, ummanni nagaye jedhee yoo ka’e humni cimaan kamuu ummata akka salphatti ukkaamsuu fi ajjeesee lafarraa dhabamsiisuu kan hin dandeenne ta’uu isaati. Oromoon sochii hanga ammaatti geggeessee fi gootummaa argisiiseen injifannoo guddaa galmeesse jedhu xiinxallitoonni siyaasaa heddu. Oromoon ajjeechaa, ukkaamsaa fi gidiraa irratti raawwatamu obsaa sochii jalqabe itti fufe taanaan wanti waan gaafate akka hin arganne, hawwii isaa akka hindhugoomfannee wanti isa daangessu kan hin jirre ta’uu ibsu, hayyoonni siyaasaa.
Previous articleHuman Rights Watch Oromoon 140 ajjeefamuu ifa godhe
Next articleOromoo tokkummaan mirga isaaf falmatu humni ukkaamsu jira hin fakkaatu